Booliska ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho oo fadeexad ka soo wajahday lacag ay kala degeen diyaarad Nairobi ka timid | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Booliska ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho oo fadeexad ka soo wajahday lacag...
Booliska ka howlgala garoonka diyaaradaha Muqdisho oo fadeexad ka soo wajahday lacag ay kala degeen diyaarad Nairobi ka timid
Taliska ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa fadeexad ka soo wajahday lacag ay dhowaan kala degeen diyaarad ka timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ay lahayd gabar ganacsato ah oo lagu magacaabo Saabiriin Cabdulqaadir Isxaaq.
Odayaasha dhaqanka beesha Muddulood ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay dalbadeen in dowladda federaalka aanay boobin lacagtaasi, iyadoo shaaca ka qaaday inay hayaan caddeymo fadeexad ku ah saraakiisha Booliska ee ka howlgala garoonkaasi.
Bayaan ka soo baxay kulanka odayaasha iyo waxgaradka beesha Muddulood ayaa looga digay taliska Booliska inuusan boobin hantida Saabiriin Cabdulqaadir Isxaaq oo iyadu iska leh lacagtaasi isla markaana ka ganacsata dahabka iyadoo ka howlgasha magaalooyinka Muqdisho iyo Islii muddo dhowr iyo toban sano.
“Waxaan ka soo horjeednaa in hantida gabadhaas la siyaasadeeyo” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka odayaasha beesha Muddulood, iyagoona hoosta ka xariiqay inay cabasho ka yihiin hadal ka soo yeeray taliyaha ciidamada Dowladda Federaalka oo doonaya inay mugdi geliyaan tirada lacagta.
Dhinaca kale lacagta ayay sheegeen odayaasha inay tiradeedu gaareyso Hal Milyan Dollar, iyagoona sheegay in Saabiriin Cabdulqaadir Isxaaq ay heyso caddeymo ku saabsan inay lacagtaas ay iyadu leedahay isla markaana ay u soo bandhigeyso ciidamada Booliska haddii loo baahdo.
Ugu dambeyntii odayaasha beesha Muddulood ayaa ka dalbaday taliska Booliska inay sii daayaan xogheynta Saabiriin iyo wiil xoghaye u ah oo xabsiga la dhigay 18-kii bishan, iyagoo gabadha ganacsatada ah ay sheegtay inay heyso codad ay ka duubtay saraakiisha ciidamada Booliska ee ka howlgasha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde.